Piritsi reTruvada Rokurudzirwa Kushandiswa Kune Vasina HIV – Makuhwa.co.zw
Piritsi reTruvada Rokurudzirwa Kushandiswa Kune Vasina HIV
Nyanzvi munyaya dzekurwisa HIV/AIDS dzinoti kunonoka kushandiswa muZimbabwe zviri pamutemo kwepiritsi rePre-Exposure Prophylaxis kana kuti Prep, iro rinonzi Truvada, kuri kudzosera nyika mushure munyaya dzekurwisa HIV/AIDS.
HARARE — Nyanzvi munyaya dzekurwisa HIV/AIDS dzinoti kunonoka kushandiswa muZimbabwe zviri pamutemo kwepiritsi rePre-Exposure Prophylaxis kana kuti Prep, iro rinonzi Truvada, kuri kudzosera nyika mushure munyaya dzekurwisa HIV/AIDS.
Piritsi iri rinoshandiswa chete nevanhurume nevanhukadzi vasina hutachiona asi vari panjodzi huru yekubata hutachiona uhwu. Piritsi iri rakatanga kubvumidzwa kushandiswa muna Chivabvu gore ra2014.
Kunyange hazvo nyika dzakabudirira dzakaita seAmerica, piritsi iri rave kutowanikwa nyore, Zimbabwe ndeimwe yenyika dzisati dzatanga kushandisa piritsi iri, iro rinogona kubatsira zvakanyanya kudzikisa kutapuriranwa kweHIV/AIDS.
Imwe nyanzvi munyaya dzeHIV/AIDS, Muzvare Anna Miti, vanoti ishuviro yavo kuti hurumende imhanye mhanye mukuona kuti piritsi iri rawanikwa munyika kuitira kuti vanhu vakawanda vazvidzivirire.
VaChamu Mashoko vanoshanda nesanganore Global Advocacy for HIV Prevention. Sangano iri rinoshanda zvakanyanya nehurumende munyaya dzehutano nekurwisana nedenda reHIV/AIDS.
VaMashoko vanoti piritsi iri rakakosha zvikuru kana Zimbabwe ichida kubudirira munyaya dzehutano.
VaMashoko vanoti mitemo ichazoiswa nehurumende yeZimbabwe ndiyo icharatidza kuti piritsi iri richazopiwa pachena here kana kwete.
Kunyange hazvo Studio 7 isina kukwaniswa kunzwa divi rebazi rezviutano, mune mumwe musangano, VaOwen Mugurungi, avo vanoona nezveAIDS ne TB mubazi iri, vakamboudza vatori venhau kuti kunyangwe zvazvo sangano reWHO rakatema zviga zvitsva munyaya dzekurwisa HIV, Zimbabwe inozokanganisika pazvirongwa zvayo nekushaya mari yakakwana.
Vakatsanamgurawo vakati apo dzimwe nyika dzave kutsvaka nzira dzekudzivirira vane mikana iri pamusoro yekubatira HIV/Aids, Zimbabwe ichitori kunetsekana nekuona kuti vese vane hutachiona vave pamishonga
Mari zhinji inoshandiswa munyaya dzehutano munyika kunyanya kurwisana neHIV/AIDS imari inobva kumasangano akazvimirira anobatsira.
Nyanzvi munyaya dzezvehupfumi dzinoti kuondomoka kwehupfumi nekubooka kwehomwe yenyika kunogona kukonzera kuti Zimbabwe itore nguva yakareba isati yoshandisa Prep
Related Topics:Piritsi reTruvada Rokurudzirwa Kushandiswa Kune Vasina HIV
Vasikana Voita Vana Vasati Vasvika Zera
Prophet uses his BIG MBORO to treat WOMEN and ONLY WOMEN